Jaceylka Iyo Astaamaha Lagu Garan Karo Ruuxa Sida Dhabta Ah Kuu Jecel | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Afrika: Goob ay ku Dagaalaman Shiinaha, Mareykanka iyo Ruushka
Jebriil Maxamed Domenico, December 9, 2019
5 Fursado Ganacsi ah oo Kabannaan Gudaha Dalkeenna Hooyo??
Ilhaan Ciise Maxamed, December 5, 2019
Haweeney Balaayiin Doolar ka Dhacday Dunida oo Dhan, oo Mar Qura La Waayay
Tuke Somalism, November 27, 2019
Aanadii Negeeye – Qeybtii 20aad
Ibraahin Yuusuf Ahmed 'Hawd', December 9, 2019
Aanadii Negeeye – Qeybtii 19aad
Aanadii Negeeye – Qeybtii 18aad
Labo Qodob Oo Soomaalidda Loogu Baahanyahay Inay Bartaan
Cabdijabaar Sh. Axmed, July 9, 2018
Waa Maxay Jaceyl?
Siddee Baan u Maarayn Karnaa Geeddi Socodka Nolosha?
Sidee Looga Takhlusi KaraaNiyad Jabka ? Qeybta 1aad ITukesomalism.com
Tuke Somalism, March 8, 2016
Gobollada Soomaaliya Tan Iyo Xorriyaddii 1960 ‘Jamhuriyadda Soomaaliya’ |Tukesomalism.com
Yuusuf Garaad, November 20, 2016
Ma dhigani Lahayd Jaamacad Macalimiin La’aan Ah?
BBC Somali, June 16, 2018
Waa Maxay ANC?
Ilhaan Ciise Maxamed, August 7, 2018
Sacdiyo Xassan Maxamed — June 5, 2018
Jacaylku waa dareen ku abuurma qofka bini aadamka, dareenkaas oo u qaadayo ruux kale waxa uuna wax ka badalaa noloshiisa ayadoo kusoo kordhaysa is badal aad u ballaaran. Is badalkaas waxa uu noqon karaa mid farxadeed ama mid murugo hadba marxaladda uu qofka ku sugan yahay. Jacaylku waxa uu ku barayaa nolosha waxa ay tahay adigoo cashar aad ka qaadanayso markuu kusoo wajaho. Waa dareen aan la xakamayn karin kaasoo ku fida dhammaan xubmnaha jirka ayadoo ay xanuunsanayaan xubnahaasi qofkana uu ka lumayo fir fircoonidii lagu yaqaanay. Waxa uu kuu diidayaa cunnada, cabida, hurdada, dhex galka bulshada iwm intaas oo dhanna waa waxa aas aaska u ah qofka inuu ku noolaado waxa uuna weynayaa farxadiisii.
Jacaylka daawadiisa waaa qofka ruuxa uu jeclaa inuu helo misna uu la aqal galo waayoo hadii uu ku guuleysto waxaa u bilaabaneysa farxaddii in muddo ah ka maqnayd waxa uuna dugsanayaa jacaylkiisii wixii laabta ka hurinaayana waa ay u qaboobeysaa mar haduu indho galgacal ah ku jiro uu ku eego jacaylkiisa misna uu laabta galiyo dabkii ku shidnaa waxa uu isku badalayaa neecaaw udgoon iyo sax saxo roobaad marna aadan kala daalayn inaad sanka la raacdo. Jacaylku ma ahan wax afka laga sheegi karo balse lagu muujiyo dareemo iyo ishaarooyin oo kaliya.
Jacaylku markuu qofka wajahayo wuxuu u kala baxaa saddex qaybood oo kala ah:
Mid indhaha ah (aragti) 2. Mid dhegaha ah (maqal) 3. Mid qalbiga (dareen)
Hadii aan mid mid u kala qaado:
1. Midka indhaha ah:
Jacaylka ku bilawda aragtida waa kan ugu sahlan uu qof ku qaado isla markaana waa kan ugu fudud ee la iloobo, waxaad arkaysaa qof baa wuxuu arkayaa qof aad usoo jiidasho badan xagga aragtida labis qurxoon dhaldhalaalna wuu ka baxayaa rag iyo dumar kuu rabo ha ahaado qofka aragtida jacaylka ku qaada markuu qofkaan arko ayuu la dhacayaa asagoon ogayn qofka waxa uu yahay iyo inuu heli doono. Isla marki waxa uu go’aan ku gaarayaa inuu qofkaan helo meesha uu ka heli karo. dhawr jeer markuu daba galo misna uu ku guuleysto inuu helo qofkii soo jiitay, haasaawe badan kadib. Waxaa bilaabanaya inuu jacaylkoodi yaraanaya ilayn waxaa soo baxaya qofkaloo aad u bilicsan si tartiib ahna wey u kala daneysanayaan.
Hadii uu qofka indha raaca uu yahay rag qofkii ishiisii qabatay uu jeclaaday hadii uu ku guuleysto inuu la aqal galo wali waa sidiisii oo gabadhii soo qoortaagtaba wuu jeclaanayaa ilayn jacaylkiyaa indhaha ka galaye. Soomaalidu waxa ay tiraahdaa qofka nuucaan oo kale ‘’ waan ku arkay waan ku caashaqay’’.
Hadii uu qofka indha raaca ay tahay dumar ayada guurka waa uu ka daahaa waayo wiil kastoo qurxoon oo isheeda qabato waa ay jeclaaneysaa mid kasii qurux badan hadee aragtana wey kasii tageysaa sidaa ayuu waqtiga uga dhamaanayaa.
2. Jacaylka dhegaha: jacaylka ku bilawda maqalka inta badan waxaa qaada dadka lasocda warbaahinta ama qof aad ku baratay maqalka number ahaan. Hadii uu qofka codkiisa, kaftankiisa aad aad ula dhacdo oo markasta aad maqasho codkiisa xataa hadii uusan hadlayn, jacaylkaas laba midkood ayuu noqonayaa: 1. Hadii uu jacaylka aad u qaaday uu yahay mid xad dhaaf ah oo u gudbay dareemaha hadii aad qofka kulantaan waxa ay noqoneysaa inaa kasii jeclaato waayoo muuqaalkiisaa kasii qurux badan codkiisa ama waxaa laga yaabaa inuu muuqaalkiisa uusan ku qancin balse jaceylka ku haaya awgeed aad u ilowda nuuca uu qofka yahay markaa waad sii xajineysaan jacaylkiina. Ama 2 waxa ay noqoneysaa in jaceylka aad u qaaday kaliya uu yahay markaa codka maqsho uun baad tabtaa hadii aad qofka kulantaa hadii uu ku qanciyo waad lasii joogeysaa hadii uu qofka ku qancin waayana waad iloobeysaa. Marka jacaylka maqalka ah waxaa asna fudud in la is ilowsiiyo waayoo kaliya waxaad iska fogeyneysaa codadkiisa hadii aad qalbiga ka maqleysa xataa dhagaha ka fureysaneysaa oo waxyaabo kale ayaad isticmaaleysaa. Inkastoo mudo kugu qaadaneyso hadana ugu dambayn waad iloobeysaa.
3. Midka qalbiga: jacaylka ku bilawda dareenka marka ugu horeyso waa kan ugu saamaynta badan waana mid leh faa’ iidooyin iyo qasaaro intaba. Waa kan ugu saxsan marka jaceylka laga hadlaayo waayo jacaylku waa dareen ma ahan afka wax laga sheegi karo inta uu la eg yahay qofkaan aad jeceshahay. Balse dareen ahaan waad ku cabiri kartaa balse cidna ma ogaan karto boqolkiiba inta uu la eg yahay. marka qaabkee buu ku bilawdaa jacaylka dareenka ah? Qofka aad jeclaaneyso waxaa laga yaaba inee howlo idinka dhexeyso sida: waxbarasho, shaqo, ehel aad tihiin, deegaan aad tihiin, safar aad ku kulantaan iwm. Marka qofkaan aad jeclaaneyso isma ogid inaa jeceshahay balse waxaad isku arkaysaa astaamaha jaceylka adigoo in muddo ah rafaaday ayaad ogaaneysaa in aad jeceshahay qofkaan. Kuma dooraneysid qurux, lacag, dabeecad iwm laakiin waxaad isku arkaysaa adigoo qofkaan tabaya, dhibsanaya hadii uu qof dhibayo, murugada la qaybsanaya, farxadeda dhawraya, maanta hadii meel la iskugu yimaada haduu qofkaaga maqan yahay aysan meesha nuur kula leheen, aragtideeda aad xiiseyneso.
Waxaa kaloo jirta astaamo kale aad ku ogaan karto qofka inaa dareen caashaq u qabto oo aadan is ogayn qofka marka aragtida koowaad indhaha ku dhufato aad naxdin qac la dheheyso, hadii uu kula hadlana wadnaha ku garaacmayo indhahana adan u dhameyn karin sidoo kale isla qofkaas aad markaa aragto aad nexeyso hadii uu kaa maqan yahay aragtidiisa aad rabooneyso. Jacaylka la xariira dareenka waa ay adag tahay inuu qofka soo bandhigo markuu ogaado inuu ruuxaan jecel yahay.
Waxa uu marwaliba isku dayayaa inuu u sheegto jacalkiisa laakiin cabsi badan ayuu dareemayaa. Hadii uu u sheegto inta badan waa ay ku guuleystaan in laga aqbalo hadii mar laga aqbalana lagama yaabo in ay dayacaan. Waxaa jirto marka waxyeelooyin badan uu leeyahay jacaylka ku bilawda dareenka waayo jacaylku wuu xanuun badan yahay dhib badan ayaana laga soo maraa. Hadii uu qofka sheegan waayo aad ayee saamayn ugu yeelanaysaa waayo qalbiga, maskaxda, xubnaha jirka intaba waa ay xanuunsanayaan qofkana waxa uu ku siganayaa inuu waasho sida la arkayba ama shaydaan ka caqli badiyoo naftiisii waayo. Dhan markii laga fiiriyana faa’iiduu leeyahay oo qofkii ku guuleysta nolosha ayaa usoo dhadhamaysa oo macaanka nolosha waa jacayl. Jacaylka dhabtaana waa kan ku bilawda dareenka marna ma dhammaado xataa hadii adan ku guuleysan wuu kugu soo laba kacayaa waligii ma dhamaanayo halka kuwa kala la is ilowsiinaye kan lama iloobi karo waana wax ku beerma laabta, saldhiga jacaylkana waa wadnaha mar haduu kaa galana lagama yaabo inuu kasoo baxo.
Bal adigu tijaabo iska qaad qofkaad jeceshahay magaciisa ku dhawaaq sadex jeer adigoo indhaha isku qabanaya waxaadna gacantaada saartaa wadnaha, hadii aad ka dareento garaac ama xanuun yar waxa ku haya jacaylka dareenka waana kan dhabta ah ee ha sii daynin. Saddex daan aan soo qaadanay waa marka ugu horeysa uu jacayl ku galaayo qaabka uu ku bilaabanayo ma aragtiyaa, ma maqalkaa mise dareenka waana soo falanqaynay in badan inaa wax ka fahamteen ayaan rajeynayaa.
Waxaan soo qaadanaynaa qofka si dhab ah kuu jecel sidee ku ogaan kartaa?
Xaqiiqdii jacaylku waxaa faallo badan ka bixin kara cidii dareenta ayadoo markaa u kuur galeysa xaqiiqda qofka haysata hadana aniga waxaan ku cabirayaa dareenkayga. Laga yaabe inaa iga ra’yi duwan tahay waayo hadba waa sida uu kugu soo gala.
Run ahaantii jacaylka dhabta ah si fudud ayaad ku ogaan kartaa hadaa kaashato caqligaaga iyo aqoonta aad ka haysato hasaawaha marka qofka sida dhabta ahi kuu jecel waxaad ka fiirisaa astaamahan:
Qofka sida dhabta kuu jecel marna kaana quusto oo waa qof leh go’aan sida uu kugu hanan lahaa xataa hadii uu kaala kulmo dhibaatooyin badan waana mid ku raja weyn inuu maalin noloshaada hantiyo.
Sidoo kale waxaad ku ogaan kartaa qofka sida dhabta ah kuu jecel waxaad ka dareemeysaa cabsi fara badan asagoo/ayadoo indhaha kuu dhamayn karin misna wajiga raaricinaya kulamada koowaad ee uu damacsan yahay/tahay inuu kula wadaago arimahiisa/heeda.
Hadii uu mar ku guuleysto inuu ku hantiyo noloshaada wuxuu kaaga taxa daraa sida ukunta oo kale misna uu kaa dhawraa dhibka.
Wuxuu u dulqaadanaa arin kasta oo xaggaaga ka timaada asagoo markaa wanaag kugula dardaarma marwaliba.
Hadallada uu ku hadlaayo qofka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu diirrada saara mustaqbalka fog iyo sida aad ku yagleeli leheedeen hoy xalaal ah asagoo markaa kaaga sheekeynaya sida uu kuula dhaqmi lahaa iyo wax yaabaha uu kuu samayn lahaa intaba.
Qofka si dhab ah kuu jecel waxa uu kugu dhiira galiyaa in qadarta rabbi lagu sabro misna hadii calafku hiiliyo aan lagu caasin wuxuu mar waliba ku xasuusinayaa jacaylku inuu ka weyn yahay calafka.
Qofka sida dhabta ah kuu jecel waa midka kula qaybsada farxad iyo murugo intaba
Qofka sida dhabta ah kuu jecel marna ma oggolaado inuu kugu soo xad gudbo hadal iyo taabasho intaba asagoo dhawraya sumcadaada iyo sharaftaadaba waayo waxa uu ku xerayaaa tiisa.
Qofka sida dhabta kuu jecel kaama qarsado arinkasta oo soo wajahda xataa wuxuu kula wadaagayaa hadii ay qof xiriir usoo bandhigtay waayo waxa uu kaa dhiganayaa sida qof uu hubo inuu nolosha la wadaagi doono.
Qofka sida dhabta ah kuu jecel waa midka ilooba kuna cafiya hadii aad qalad ka gasho waayo markuu kula kulmo ama kula hadlo waa uu iloobaa wixii aad ka samaysay mana badna eediisa.
Intaa laguma soo koobi karo astaamaha aad ku garan karto ruuxa sida dhabta ah kuu jecel.
Ugu dambeyn waxaan kusoo koobayaa jaceylku waa nabar xanuun badan isla markaana hadii aad hesho ruuxaad jecleyd aad dunida ku joogeyso farxad, waxaa la yiraahdaa hadii aad heysato qof ku jecel waxaad heysataa dhakhtar adiga kuu qaas ah.
Waxaase nasiib xumo ah jaceylka haduu mar kaa xumaado ay adkaaneyso inaa dib u hesho farxadaadii illaa in muddo ah maahane. Waxaa jirtay gabar ku guul dareysatay jaceylkeedii ugu horeeye isla markaana aysan arki Karin wax jaceyl sheegayo, ayadoo cabireyso dareenkeeda waxa ay tiri:
Jaceyl waa jab weynoo,
hadduu keli ku jiidee
Soo jeed aan dhammaan iyo,
fikir joogta baad geli
wuu kaa jeedinayaa
Jaceyl waa luggooyee,
nafsadaada ha jarribin
Ruux kaa sii jeedana,
waligaa ha jeclaan
Dhankaluu u jeedaa,
xubin kastaa I jaranoo
Aan la joogi waayee,
Jiifkiyo joogga, ii diidayee
Jaceylkaan xaggeen u jiheeyayaa?
Hadba marxalladduu kugu soo maro ayaad ku cabireysaa, ogowna jaceylku kaftan maaha iyo sanadahan waxa jira ‘’ biyaha ayaan kaa arkay iyo baby dartaa waan u dhimanayaa, dhawr maalin dabadii xiisuhu markuu dhaco bye bye barbaaryahow boqolaal kaa bilicsanaan bartaye iga bayr’’. Dhallinyaradda haddalladooda ayaa sidaa ah inta badan.
Tags: Jaceylka Iyo Astaamaha Lagu Garan Karo Ruuxa Sida Dhabta Ah Kuu Jecel
Next post Qaababka Loo Baran karo Luuqado Cusub
Previous post Baraha Bulshada Iyo Tahriibka
About the Author Sacdiyo Xassan Maxamed
Waa qoraa ka tirsan Tuke Somalism. Waa qoraa wax ka qorta arrimaha waxbarashadda, qoysaska, jaceylka, garab siinta dadka dhibaateysan iyo maamulka iyo maareynta. Waa qoraa aqoon gaar ah u leh maamulka iyo maareynta, sidoo kale waa maclimad wax ka dhigta mid kamid ah jaamacadaha dalka ku yaala.
Waa Maxay Xalka ugu Dambeeyo ee Khilaafka Masaajidka Soomaalida ee Towfiiq - Oslo, Norway?
Fallan-qeyn: Buugga 'Dhamaadka Taariikhda iyo Ninkii Ugu Dambeeyay"!